Xubno Ka Socda Golaha Amaanka oo Muqdisho Yimid | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Xubno Ka Socda Golaha Amaanka oo Muqdisho Yimid
Xubno Ka Socda Golaha Amaanka oo Muqdisho Yimid
Muqdisho (XT): Safiirrada Xubanaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa la kulmay masuuliyiinta ugu sarreysa dalka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya si ay ugala hadlaan doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan sanadkan.
Safiirradan ayaa kulamdooda keddib sheegay in ay Soomaaliya u yimaadeen sidii ay madaxda ugala hadli lahaayeen dardargelinta nidaamka doorashada oo ay Barlamaanka Federaalka ah ku guuldarreysteen in ay ansixiyaan balse Madaxweyne Xasan Sheekh uu dikreeto ku ansixiyay.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa leh in tallaa bada Madaxweynaha ay timid kaddib cadaadis is daba joog ah oo ay beesha caalamka saartay dowladda Soomaaliya si aan muddo kororsi u imaan. Balse buuq siyaasadeed oo dhanka Barlamaanka ah ayaa ka dhalan karo go’aanka Madaxweynaha uu ku sharciyeeyay hannaanla doorashada.
Safiirka Ingiriiska u fadhiya Qaramada Midoobay Mudane Matthew Rycroft ayaa sheegay in sidoo kale kala hadleen madaxda sare sidii loo heli lahaa ciidan Soomaaliyeed oo shaqadiisa hanan kara.
Madaxweynaha oo hadal ka jeediyay shirka ayaa yiri “Waxaan sameyney horumar la taaban karo. Waxaa guusha horumarka aanu gaarney uu mira dhal noqon doonaa marka aan la imaano tanaasul, isla markaasna aan meel marino doorashooyinka taariikhiga ah ee loo ballansan yahay. Waa inaan ku dadaalnaa intaan kari karno in hannaanka siyaasadda dalka ay cid walba iska dhex aragto, lagana dhigo barnaamij loo wada dhan yahay.’’
Madasha wadatashiga oo ka kooban masuuliyiinta sare ee dowladda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa bishii hore ku heshiiyay qaabka doorashada. Taasi waxay walaac ku abuurtay beesha calaamka oo faragelin muuqata ku leh siyaasadda dalka.
Dowladda Mareykanka oo war kasoo saartay ayaa walwal ka muujisay sida ay wax u socdaan, waxayna codsatay in qorshaha doorashada sidiisa loo fuliyo.
Booqashada Safiirradan ayaa cadeyn u ah in xaaladaha amni ee dalka uu isbadal weyn ka jiro, inkasta oo shirkan lagu qabtay gudaha Xarunta Xalane oo ah magaalo kale oo ku dhex taallo caasimadda oo ay maamulaan ciidamada AMISOM oo wax kasoo dega iyo waxa ka baxa aysan dowladda Soomaaliya warba u haynin.
Booqasha Golaha Amaanka ayaa muujineysa walwalka ay ka qabaan dalalka Soomaaliya taageera marxaladdan kala guurka ah ee loogu diyaargaroobayo in doorasho laga hirgeliyo dalka.
Xubanahan ka socday Golaha Amaanka ayaa wadahadal la yeeshay madaxda sare ee Xafiiska Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM) iyo Hawlgalka Nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo xubno ka socday bulshada rayidka.
Wafdiga ayaa booqashadooda Somaaliya keddib kusii hakaday dalka Kenya iyaga oo kala xaajooday xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya. Safiirradan ayaa Kenya u sheegay in barakicinta khasabka ah ee qaxootiga lagu sameynayo ay tahay mid kasoo horjeeda sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah, loona baahanyahay in ay Kenya ixtiraamto heshiisyada ay saxiixday ee caalamiga ah.
Previous articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Madasha MAAN
Next articleMaxaa Macno Tiray Maqaamka Muqdisho?